त्यति सजिलै कर्जाको ब्याजदर घट्ने संकेत देखिँदैनः ग्लोबल आइएमइ बैंकका सीइओ जनक शर्माको लेख – Clickmandu
त्यति सजिलै कर्जाको ब्याजदर घट्ने संकेत देखिँदैनः ग्लोबल आइएमइ बैंकका सीइओ जनक शर्माको लेख
जनक शर्मा पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ग्लोबल आईएमई बैंक २०७५ असोज १ गते ९:०० मा प्रकाशित
सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशमा बैंकको संख्या बढी तथा बैंकमा पुँजी लगानी वृद्धि भएपछि बैंकको व्यवसाय बढाउनु पर्छ । बैंकले व्यवसाय बढाउने भनेको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा/लगानी गर्नु नै हो । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा व्याजदरले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । जसरी बस्तु र सेवाको एउटै लागत हुन्छ त्यस्तै हामीले संकलन गर्ने निक्षेपको पनि लागत हुन्छ । त्यहि लागतको आधारमा र अन्य नियमनकारी परिधि भित्र रहेर हामीले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो ।
मिडियामा जसरी बैंकले एकतर्फिरुपमा ब्याज बढाए भन्ने आइरहेको हुन्छ बास्तवमा त्यस्तो होइन । सामान्यरुपमा बैंकको वेस रेट तलमाथि हुँदै ब्याजदरमा फेरबदल भएको हुनसक्छ । हाम्रो निक्षेपको बजार एकदमै सानो छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यपछि निक्षेपमा सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । जसमा अहिलेसम्म पनि अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन । निक्षेपको ट्रेन्ड कस्तो हुन्छ भन्नेकुरा सामान्यतया आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यपछि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विगतका वर्षहरुमा पहिलो त्रैमासिक अवधीमा कर्जा बढाउने भन्दा निक्षेप बढाउने समय हो । गतवर्षसम्म पनि निक्षेप बढाउन सक्ने अवस्था थियो । तर, यो वर्ष निक्षेपभन्दा कर्जा रकम नै बढेको छ ।
निक्षेप बृद्धिदर कम भयो र सिसिडि रेसियो नजिक भयो भने निक्षेपमा ब्याजदर बढ्छ । निक्षेपमा ब्याजदर बढेपछि कर्जामा पनि स्वभाविकरुपले ब्याजदर बढ्छ । निक्षेपको बृद्धिदर हेरेर मात्रै असोज मसान्तपछि ब्याज घट्ने वा बढ्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
गत आर्थिक बर्ष बैंकहरुको लागि निक्कै नै अप्ठ्यारो बर्षको रुपमा रह्यो । निक्षेपमा आशातित बृद्धि नहुदाँ पूरा बर्ष नै बैंकहरु क्रेडिट क्रन्चको अवस्थाबाट गुज्रनु पर्यो । अहिले पनि कतिपय बैंकको सिसिडि रेसियो ७८ को हाराहारीमा छ । नियमनकारी व्यवस्था अनुसार हाम्रो सिसिडि रेसियो ८० भन्दा बढि हुनुहुँदैन । पूजीँ ४ गुनाले बढ्दा बैंकलाई नाफा बढाउने मानोबैज्ञानिक प्रेसर परेको हो ।
२ अर्वका ३२ बटा बैंक र ८ अर्वका २८ बटा बैंक हुनुमा बैंकको व्यापारको हिसाबले खासै फरक रहेन । किनकि हामीले व्यापार व्यवसाय गर्ने परिधि एकदमै सानो छ र यहि सानो परिधि भित्र हामी सबै बैंकहरु लगानी गरिरहेका छौँ । निक्षेपमा सुधार आएको भए व्यापार व्यवसायले फड्को मार्न सक्थ्यो होला ।
तर त्यो नहुदाँ क्रेडिट क्रन्चबाट पूरा वर्ष नै गुज्रनु पर्यो । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट बैंकले ऋण ल्याउन सक्ने र पछिल्लो मौद्रिक नीतिदेखि भारतबाट पनि ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर त्यसका केहि प्राबिधिक कठिनाईहरु छन् । पहिलो कुरा हाम्रो देशको क्रेडिट रेटिङ्ग निक्कै नै कमजोर छ । जसले गर्दा हामिले गर्ने ऋण लिँदा ब्याजदर बढी हुन्छ । त्यसमा ड्यु डेलिजेन्सको आधारमा सम्बन्धित बैंकको क्रेडिट रेसियो फेरि छुट्टै होला ।
हामीले रेट बढी भए पनि ल्याउनुहुन्थ्यो तर त्यसमा हेजिङ्गको व्यवस्था छैन । बैंकले २/३ वर्षको लागि बिदेशी ऋण लिदाँ हालको ३ महिनाको हेजिङ्गले काम गर्न सक्दैन । डलरको दर हरेक दिन बढेको छ र हुदाँहुदै डलरको रेट ११६ सम्म पुगिसक्यो जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलन नै विग्रने खतरा छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छन् । निर्यात बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित भएको छैन । सन् १९६०/६१ मा ‘डच डिजिज’ बनेर आएको थियो अहिले त्यस्तै अवस्था आउने हो कि भन्ने खतरा छ ।
असारमा आएर धेरै बैंकको आधार दर घटेको छ । साउनमा पनि आधार दर घटेको छ । अब असोज मसान्त सकिन १ महिना बाँकी छ । निक्षेपको अवस्था सहज भएमा १ महिनापछि कर्जाको ब्याजदर थप केही घट्न सक्छ ।
पहिलो त्रैमासिकको बाँकी अवधिमा सरकारले गर्नुपर्ने सरकारी खर्च गर्छ कि गर्दैन । त्यसले निक्षेप सहज हुनलाई बाटो देखाएको हुन्छ । बाह्य चुनौति बढेको डलरको मूल्यले दिइसकेको छ ।
सरकारको वित्त नीतिले आन्तरिक ऋण २२.५ प्रतिशतले बढाउने कुरा गरेको छ । निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशतले बढाउने कुरा गरेको छ । त्यो गरेपछि ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि मौद्रिक नीति पनि आइसकेको छ ।
सरकारी ऋण र निजी क्षेत्रमा जाने ऋण बढाउनको लागि सहयोग गर्ने गरेर मौद्रिक नीति पनि आयो । मौद्रिक नीति आफैंले केही गर्न सक्दैन । यसमा काम गर्ने भनेको वित्त नीतिले हो । पहिलो त्रैमासमा गर्नुपर्ने खर्च जति भनिएको त्यो हुनुपर्यो । त्यो त्रैमासमा उठ्ने राजस्वले बैंकको निक्षेपलाई असर गर्नु भएन ।
गत वर्ष राजस्वमा पैसा जम्मा भयो । तर, सरकारले गर्ने खर्च भएन । जसले गर्दा निक्षेपको ब्याजदर पनि एउटा बिन्दुमा बस्छ त्यो भएपछि स्वभाविक रुपले कर्जाको ब्याजदर पनि एउटा बिन्दुमा बस्ने हुन्छ । अब पहिलो त्रैमासपछि सरकारले उठाउने राजस्व उठाएको हुन्छ । यदि पैसा खर्च नभएमा पैसा सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ । बजारमा हाहाकार हुन्छ ।
एउटा उदाहरण हेरौं । मसँग एक रोपनी जग्गा भएको ठाउँमा असारमा मैले धान रोपे । कात्तिकमा धान काटेर गहुँ छरे । माघमा गहुँ काटेर आलु छरे । फेरी चैतमा मकै छरेर असारमा मकै काटेर धान रोपे । कृषि उत्पादन ४ सिजनमा हुन्छ । राज्यले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पैसाको खर्च हरेक सिजनमा गर्नुपर्यो ।
अघिल्लो वर्ष हामीले १४ प्रतिशतमा निक्षेप उठाएको हो । १४ प्रतिशतमा निक्षेप लिएपछि हामीले कति प्रतिशतमा कर्जा दिने ? बैंकरले निक्षेपमा गरेको भद्र सहमतिलाई धेरैले कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाउनुभयो । बैंकले निक्षेपमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरन लगाएकोे भए कर्जाको ब्याजदर कति पुग्ने थियो ? हामीले अर्थतन्त्र बचाएको हो । उद्यमी र व्यवसायीलाई बचाएको हो ।
निक्षेपमा सहजता आउने भनेको कुरा सरकारी खर्चमा नै निर्भर हुन्छ । समयमा नै खर्च हुनुपर्यो । अर्थतन्त्र चलायमान भइरहन्छ । सरकारी खर्च समयमा नै हुने हो भने कर्जाको ब्याजर पनि क्रमिक रुपमा घट्दै जान्छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि बढेको बेसरेट चैतदेखि घट्न थालेको छ । साउनसम्म यो घटेको छ ।तर, पहिलो त्रैमाससम्म यसले कस्तो बाटो लिन्छ, त्यो भन्न सकिँदैन ।अबको दिनमा निक्षेप सहज हुन थाल्यो भने कर्जाको ब्याजदर घट्छ । निक्षेपको लागत कम भएपछि कर्जाको दर पनि कम हुन्छ । यो कुरा बजारमा नै निर्भर हुन्छ ।
डलरको बढ्दो मूल्यले केहि साता यता पैसा थपिएको छ । तर, यसको असर आयातित अर्थतन्त्रमा पर्न जान्छ । अहिलेको तथ्यांकले निक्षेपमा सहजता आउलानै भन्न सकिन्न ।
नयाँ आर्थिक वर्षको लगभग २ महिनाको यात्रामा कर्जा लगभग ४४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । निक्षेप १५ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । त्यसमा नै हेर्ने हो भने सिसिडीमा असर गरिसक्यो । तर, असारमा पैसा आएको हुँदा झारेको छ । ऋण दिने स्पेश कम हुँदै गएको छ ।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कर्जाको ब्याजदरको चार्ज निक्षेपको लगतले नै निर्धारण गर्ने हो जबसम्म निक्षेपको बृद्धिदर सन्तोषजनक रुपमा हुदैन तबसम्म कर्जाको ब्याजदरमा चाप परिनै रहन्छ ।